डीपीएल सञ्जीवनी बुटीजस्तै - पाँच प्रश्न - साप्ताहिक
डीपीएल सञ्जीवनी बुटीजस्तै
पवन अग्रवाल नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान हुन् । उनले नेपालका लागि एक दशकभन्दा बढी खेले । क्रिकेट खेलाडी संघका अध्यक्षसमेत रहेका अग्रवाल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले गठन गरेको सल्लाहकार समितिका सदस्यसमेत हुन् । क्रिकेटलाई प्राविधिक रूपमा राम्रोसँग बुझ्ने पवनसँग धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) मा केन्द्रित रहेर गरिएको पाँच प्रश्न :
डीपीएलजस्तो प्रतियोगितालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालमा घरेलु क्रिकेट शून्यजस्तै स्थितिमा पुगेको बेला डीपीएल सबैका लागि सञ्जीवनी बुटी भएर आएको छ । अहिले डीपीएलजस्तै निजी क्षेत्रबाट हुने प्रतियोगिताले नै नेपाली क्रिकेटलाई धानेको छ भन्दा फरक पर्दैन । बृहत् रूपमा हुन लागेको डीपीएलले खेलाडीहरूलाई व्यवसायिक रूपमा पनि फाइदा पुर्‍याउनेछ । यसको ढाँचा पनि राम्रो छ ।
प्रतियोगिता कसले जित्न सक्छ अथवा को–को राम्रा दाबेदार हुन् ?
ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा कसले जित्न सक्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । छोटो संस्करणको क्रिकेटको विशेषता नै यही हो । यसमा कुनै नाम नचलेको खेलाडीले पनि स्थिति पल्टाउन सक्छ भने कहलिएको राम्रो खेलाडी पनि असफल हुन सक्छ । अझ एक अथवा दुई ओभरमै पूरा खेलको समीकरण परिवर्तन हुनसक्छ ।
ट्वान्टी–२० क्रिकेट बढी हुँदा यसले हाम्रा खेलाडीलाई हानि त गर्दैन ?
अहिले ट्वान्टी–२० क्रिकेट विश्वव्यापी रुपमै स्थापित भैसकेको छ । यस अर्थमा यसले खेलाडीहरूको कौशलमा हानि पुर्‍याउला जस्तो लाग्दैन, तर यसले लामो संस्करणको क्रिकेटलाई भने फाइदा पुर्‍याउँदैन । बरु लामो संस्करणको क्रिकेटले ट्वान्टी–२० क्रिकेटलाई भने फाइदा पुर्‍याउँछ ।
लामो संस्करणको क्रिकेट पनि त चाहिन्छ, होइन र ?
सबैभन्दा पहिले हाम्रो लक्ष्य के हो निश्चित हुनुपर्छ । हाम्रो लक्ष्य लामो संस्करणको क्रिकेट नै हुनुपर्छ । राम्रा क्रिकेट खेलाडी उत्पादनका लागि एक दिन अथवा त्योभन्दा बढी दिन खेलिने क्रिकेट नै आवश्यक हुन्छ ।
त्यस्तो क्रिकेट कसले आयोजना गर्ने त ?
नेपाल क्रिकेट संघजस्तो आधिकारिक संस्थाले वान डे अथवा त्योभन्दा बढी दिनको क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित गर्नुपर्छ । नेपालका लागि अहिले तत्काल वान डे अथवा टु डे म्याच उपयुक्त हुन सक्छ । त्यसका लागि ठोस कार्यक्रम बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।